ရှ Clematis ကနေပြန့်ပွားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Clematis - လူအတော်များများအိမ်တွင်းအဘို့သတိရလာသည်ဟု unpretentious ဥယျာဉ်ကိုယဉ်ကျေးမှု။ ဒါဟာအလှဆင်ဘို့စံပြဖြစ်ပါတယ် တကွတဲ၏ နှင့် pergolas ။ သို့သော်ဥယျာဉ်မှူးအပင်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အခါအချိန်ရှိလာပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွင်း clematis ပြန့်ပွားသကဲ့သို့စိတ်ကိုမေးခွန်းများလာကြဒီအဘို့ပြုခံရဖို့ဖြစ်နိုင်သည်?
မွေးမြူရေး clematis များအတွက်မကြာခဏရှကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါပေမယ့်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ, ချုံခွဲဝေ layering ။ စက်ရုံအားလုံးပူနွေးသောရာသီ blooms ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဤမေးခွန်းကိုအားဖြင့်စဉ်းစားရခက်ပန်းဆိုင်။ ဘုရ်ှသည်အထူးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ပေမယ့်ဥယျာဉ် decorates မထားဘူး။
နွေကာလ၌ရှနခြင်းဖြင့် clematis ပြန့်ပွားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ထိုလုလင်သည်စက်ရုံအသစ်ကတည်နေရာနေသားတကျတယ်ထားပါတယ်ရန်, ရှကျန်းမာအပင်များမှသီးသန့်ဖြတ်နေကြသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ ရှဖြတ်တောက်ဘို့အကောင်းဆုံးအချိန် - ထိုဘူးသီးထွန်းသစ်စကြသောအခါကာလ။
အညွန့်ကိုရှေးခယျြတကျောက်ကပ်ကနေကွဲကွာနေကြသည်။ ဤသည်လုံလောက်သောပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဒါဆိုရှသို့ဖြတ်နေကြသည်။ အထူးအေးဂျင့်များအသုံးပြုမှုလျင်မြန်စွာအတွက် root အားပေးအားမြှောက်။ ထို့ကြောင့်မေးခွန်းတစ်ခုအပြုသဘောအဖြေပေးထားသော - ကရှ Clematis အားဖြင့်ပြန့်ပွားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပန်းပွင့်ချုံစိုက်ချင်သောသူတို့အဘို့မတန်တဆစျေးနှုန်းများမှာအပင်ကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တောင်မှအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဥယျာဉ်မှူးတစ်ဦးသေးငယ်တဲ့သစ်ခက်ကနေကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ မြေပြင်သို့အလုံအလောက်သူမ၏ prikopat ။ ကြောင့်မွေးမြူရေး၏ဤနည်းလမ်းအားလုံးအောင်မြင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းထိုသို့ clematis အခက်များပြန့်ပွားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိမေးခွန်း, ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကိုအဘယ်သူမျှမပါပဲ။
နွေကာလ၌ clematis ပြန့်ပွားဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားတဲ့အခါ, တစ်ဦးသင့်လျော်သောအချိန်စောင့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, စိုက်ပျိုးခြင်းရှများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်လျော်သြဂုတ်လဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အမည်ရ, အချို့အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာ:
ထို့ကြောင့်ရှနေဖြင့် clematis ပြန့်ပွားရန်အဖြစ်မေးခွန်းကိုဖြေရန်, သငျသညျကိုထိရောက်စွာမိမိတို့၏ပိုင်နက်ကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ငွေပမာဏအတွက်အပင်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။
Actinidia - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
နှင်းဆီပန်း - ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများ
ဖြုတ်ကော်လာဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ? ဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အင်္ကျီအဘို့လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကော်လာ
ဆွေမျိုးသားချင်းများ "တက် pumped": Meghan Markle အဘယ်ကြောင့်မင်းသားဟယ်ရီ၏ဇနီးဖြစ်လာမဟုတျလော
လက် Disgidroticheskaya နှင်းခူ - ကုသမှု
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ dysplasia - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသမှု, ကင်ဆာတားဆီးဖို့ဘယ်လို?
အဘယ်အရာကို 14 နှစ်များအတွက်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ပေးရ?
Apitherapy - အမှတ် uzhalivaniya
ကိုယ်ဝန် Toxemia - ဘာလုပ်ရမှန်း?